Burma Partnership | Burma's Military Elections Info Hub » Ethnic Nationalities
December 1, 2010 | Tags: Christian Solidarity Worldwide, Daw Aung San Suu Kyi, Dialogue, Ethnic Nationalities, Fighting, Karen, Refugees, SPDC Army | Read more >>
“Voters were watched closely while casting votes. It was not free. There will not be change… We were scared and there was nothing we could do”[...]
November 19, 2010 | Tags: Burma Election Tracker, Election Bulletin, Election Report, Ethnic Nationalities, Union Election Commission, Union Solidarity and Development Party | Read more >>
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (040-2010)
UN Secretary-General Ban Ki-Moon demanded the SPDC regime again on October 29 to free all political prisoners and open the way to national reconciliation, saying that it was not late yet to carry out genuine democratization in Burma.
Local authorities and SPDC army joined hands to extort money through Naungpein village tract headmen on the pretext of polling-station construction and military outpost fencing, local residents reported.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မနှောင်းသေးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံတိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ [...]
October 31, 2010 | Tags: Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, National Reconciliation, Network for Democracy and Development, Political Prisoners, Weekly Political Events | Read more >>
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (036-2010)
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေ စိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော Network for Democracy and Development (NDD) သတင်းနှင့်သုတေသနဌာနမှ နအဖ၏ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေနေ အဖြစ်အပြက်များကို အပတ်စဉ် ရှာဖွေ စုစည်း ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။ ထိုအပတ်စဉ် မှတ်တမ်းတွင် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ တို့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထားသော အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြန်တွင်းပြည်ပမှ ပြည်သူလူထုတို့၏ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ [...]
October 3, 2010 | Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events | Read more >>
* ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာ ဗဟန်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ မဲပေးခွင့်စာရင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်ပါဝင်ခြင်းမရှိဟု ရန်ကုန်မှလာသည့် AP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ [...]
September 26, 2010 | Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events | Read more >>
* ကရင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် မထောကုန်းကျေးရွာ အနီးတွင် ကရင်အမျိူးသာ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်ရင်း (၉) နှင့် နအဖစစ် ကွပ်ကဲရေးဌာနချူပ် စကခ (၁၆)မှ ခြေလျင် တပ်ရင်း ခလရ (၂၄၂)တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိသောကြောင့် ဒေသခံရွာသား ၂၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်နေကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်[...]
September 19, 2010 | Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events | Read more >>
Myanmar deprives ‘millions’ of vote in ethnic areas
Myanmar is scrapping voting in swathes of insurgency-plagued ethnic areas in its first election in two decades —amove criticised as excluding millions fromapoll already seen as undemocratic.[...]
September 17, 2010 | Tags: Ethnic Armies, Ethnic Nationalities, Union Election Commission | Read more >>
* ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်းတော မြို့နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာများကို မက်လုံးပေးစည်းရုံးသည့်အနေဖြင့် ယာယီနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် အဖြူရောင်ကတ်များအား ငွေကျပ် ၂၀၀၀ ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသော်လည်းခရီးသွားလာရာ တွင် လွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်း ရိုဟင်ဂျာအရေးလေ့လာသူတစ်ဦးကပြော[...]
August 29, 2010 | Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events | Read more >>
August 22, 2010 | Tags: Burmese, Ethnic Nationalities, Network for Democracy and Development, Political Parties, Weekly Political Events | Read more >>